Weerar ka dhacay Kenya - BBC Somali
Weerar ka dhacay Kenya
Image caption Dadka ayaa laga gubay guryahooda oo guryo la'aan ah.
Wasaarada Arrimaha Gudaha ee Kenya ayaa sheegtay in labaatan iyo sagaal qof la dilay laba weerar oo lagu qaaday degaano xeebta Kenya ee Soomaaliya u dhow.
Labaatan qof ayaa lagu dilay Gamba oo ka tirsan Tana River, halka sagaal kale lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay xarun ganacsi ee deegaanka Hindi ee u dhow Soomaaliya.
Dadka ayaa fiirsanayay koobka adduunka markuu weerarka dhacay. Weerarka labaad ayaa ka dhacay meel u dhow Mpeketoni halkaasoo in kabadan lixdan qof lagu dilay bishii hore.
Alshabaab ayaa sheegtay inay weerarka qaaday.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in tobanaan nin oo hubaysan ay xabado ku fureen xalay.
"Waxay ku wareegeen tuulada oo ay xabado ku fureen iyagoo oo aan qofna kala soocin" ayuu u sheegay Reuters Cabdallah Shahasi oo ah madaxa deegaanka.
Gudoomiyaha gobolka Miiri Njenga ayaa u sheegay wakaalada in xafiisyo dowladda iyo guryo la gubay.
Dadka dhintay ayaa ah niman badankood, inta aan ka aheen wiil isku dayay inuu cararo, sida ay sheegtay AFP.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya oo markii hore la filaayay inuu booqdo deegaanka Mpekoteni, oo bishii May weerar lagu qaaday ay ku dhinteen in kabadan 60 qof ayaa gaaray deegaanadii xalay ay weerareen kooxo hubeysnaa.
Image caption Gaariyo boliis oo la gubay
William Ruto, oo warbaahinta kula hadlay deegaanada uu tagay ayaa sheegay in laamaha amniga uu u sheegay inay 48 saac guydahood ay ku soo qabtaan dableyda weerarka masuulka ka ahayd.
Asigoo sidoo kale la hadlay dad isugu soo baxay deegaanka Hindi oo xalay lagu dilay 9 qof, waxa uu sheegay in booliska ay tahay inay qaadaan howlgal ay kaymaha kaga soo saarayaan kooxda hubeysan ayna soo qabtaan iyagoo nool ama dhintay.
Madaxweyne Kuxigeenka Kenya oo ay wehliyaan gudoomiyayaasha deegaanada la weeraray, ayaa sheegay inay qadayaan tallaabo ay ku xaqiijinayaan soo qabashada kooxaha weeraray deegaanada Mpeketoni, Poromoko, Witu iyo Hindi.
Dad ku dhintay weerar kale oo ka dhacay Kenya